networks | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
OSGEAR Desktop ကိုကြိုးမဲ့စီးရီးယာဉ်မောင်းထောက်ခံမှု – DW600BT 802.11a/b/g/n 150Mbps ,802.11ac 433Mbps Enhanced 600Mbps Wireless data transmission Rate,ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်မြန်နှုန်း. ဘလူးတုသ် 4.0 ဖွ […]
OSGEAR Desktop ကိုကြိုးမဲ့စီးရီးယာဉ်မောင်းထောက်ခံမှု – DW1200BT 802.11a/b/g/n 300Mbps ,802.11ac 867Mbps Enhanced 1200Mbps Wireless data transmission Rate,ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်မြန်နှုန်း. ဘလူးတုသ် 4.0 ဖွ […]
OSGEAR Desktop ကိုကြိုးမဲ့စီးရီးယာဉ်မောင်းထောက်ခံမှု – DW2030BT 802.11a /b/ g / n 300Mbps ,802.11ac Enhanced 2030Mbps ကြိုးမဲ့ဒေတာထုတ်လွှင့်နှုန်း 1733Mbps,ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်မြန်နှုန်း. ဘလူးတုသ် 5.0 ဖွ […]
ဧပြီလ 23, 2019 မောင်းသူ 0
OSGEAR ကြိုးမဲ့စီးရီးယာဉ်မောင်းထောက်ခံမှု – အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု RTL8814AE. ယာဉ်မောင်းသူသာနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ RealTek များအတွက် download, ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည် / Qualcomm မှ software များ. မော်ဒယ် Apply: DW1300BT-RTL8814AE Purpose: […]
HD Graphics စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Technology_Internet Samsung က စီပီယူ ဥပဒေရေးရာအနက် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Intel က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် processor ​​ကို Nokia က OS ကို-STORE Software များ ပရိုဆက်ဆာ 64-နည်းနည်းက Windows device ကိုမော်ဒယ် HTC က မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာ
Intel က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု processor ​​ကို Sony Ericsson က ဥပဒေရေးရာအနက် Software များ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Intel က Server ကို Technology_Internet OS ကို-STORE device ကိုမော်ဒယ် စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပရိုဆက်ဆာ နည်းပညာ HTC က HD Graphics စီပီယူ 64-နည်းနည်းက Windows Samsung က စမတ်ဖုန်းများ Samsung ရဲ့ Galaxy မိုဘိုင်းဖုန်း Qualcomm မှ Nokia က